आयोजक रूससहित ४ देश र ३ खेलाडीलाई फिफाले गर्यो कारबाही - Everest Dainik - News from Nepal
आयोजक रूससहित ४ देश र ३ खेलाडीलाई फिफाले गर्यो कारबाही
काठमाडौं, असार १७ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) २१ औं विश्वकप आयोजक रसियालाई रंगभेदी व्यवहार गरेको भन्दै जरिवाना गरेको छ ।
उरुग्वेसँगको खेलमा रंगभेदी ब्यानर प्रदर्शन गरेको आरोपमा आयोजक रसियालाई फिफाले १० हजार स्विस फ्र्यांक्स डलर जरिवाना गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस उरुग्वे र फ्रान्स भिड्दै, कुन टिम अगाडि बढ्ला ? यस्तो छ विगत
लीग चरणमा उरुग्वेसँगको खेलमा रुस ३–० ले पराजित भएको थियो । खेल चलिरहेका बेला रुसका प्रशंसकले रंगभेद झल्किने खालको ब्यानर प्रर्दशन गरेको फिफाले जनाएको छ ।
त्यस्तै सर्बियाले ब्राजिलसँगको खेलमा राजनीतिक तथा अपमानजनक शब्दसहितको ब्यानर प्रदर्शन गरेका कारण फिफाले उसलाई १५ हजार पाउण्ड जरिवाना लगाएको छ ।
स्विडेनसँगको खेलमा मेक्सिकोका प्रशंसकले बोतल तथा विभिन्न बस्तु फालेकाले मेक्सिकोलाई पनि ११ हजार ५ सय पाउण्ड जरिवाना लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, स्पेनसँगको २–२ को बराबरीमा खेल सकिएपछि मोरक्कोका टेक्निकल स्टाफले मैदानमै अवरोध पुर्याएकाले फिफाले उसलाई ५० हजार पाउण्ड जरिवाना तोकेको छ ।
याे पनि पढ्नुस मेक्सिको र स्वीडेनबीचको खेल शुरु, कसले मार्ला बाजी ?
गएको हप्ता गोल गरेको खुशी मनाउने क्रममा राजनैतिक सन्देश झल्किने हाउभाउ देखाएका कारण ३ जना स्विस खेलाडीलाई फिफाले कारबाही गरेको थि
ट्याग्स: fifa, world Cup 2018